Itekhnoloji yeSMT-iPandawill Technology Co, Ltd.
Ukuhambisa ubhetyebhetye, ukuphendula, umgangatho olungileyo kunye neemfuno zelixesha lokuqhubeka, siyaqhubeka nokutyala imali koomatshini abatsha, iinkqubo kunye nokubaluleke kakhulu kubantu bethu. Ngemigca emine edityaniswe ngokupheleleyo yesantya se-SMT kwimveliso ephambili. Umgca ngamnye uneprinta ezenzekelayo ye-Desen kunye ne-oveni enesibhozo ye-oveni, edityaniswe nabahambisa ngokuzenzekelayo kunye nabalayishi / izinto ezothulwayo, kunye nenkqubo ye-AOI esemgceni. Umatshini wethu unako ukuphatha izinto ukusuka kwi-0201 zokuxhathisa ukuya kuluhlu lwegridi yebhola (i-BGA), i-QFN, iPOP kunye nezixhobo ezifanelekileyo ze-pitch ukuya kuthi ga kwi-70mm2.
Ukushicilelwa kweSolder yinkqubo ebaluleke kakhulu, ethi i-Desen iprinta ngokuzenzekelayo ifezekise ngokuchanekileyo nangokungaguquguqukiyo, kunye novavanyo olwakhelweyo oluzenzekelayo lokuqinisekisa. Ukucoca kwakhona kweSolder kucutshungulwa ngononophelo kusetyenziswa ii-oveni ezihambisa umda we-8.
I-SMT yethu Iinkqubo zixhaswa ngokupheleleyo ziinjineli ezinamava ze-IPC, zisebenzisa izixhobo zetekhnoloji yamva nje yokumisela inkqubo kunye nokuqinisekisa. Zonke iindibano ze-SMT zivavanywa nge-AOI kusetyenziswa iinkqubo ze-AOI ezikumgca. I-X-ray iyafumaneka ngetadi entle kunye nokuhlolwa kweBGA.
Ulawulo lwezixhobo lubandakanya ii-oveni zokubhaka kunye nokugcinwa okomileyo komgangatho ofanelekileyo. Kuba uhlengahlengiso kunye nohlaziyo, izibonelelo ezibini ezixhotyiswe ngokupheleleyo zokuhambisa inowuthi / BGA ziyafumaneka.